Banyere Yourlite - Ningbo Yourlite Imp & Exp Co., Ltd.
Ningbo Yourlite Imp & Exp Co., Ltd e guzobere na 1996, emi odude ke Ningbo, China.Mgbe ọganihu nke ihe karịrị afọ iri abụọ na ise gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ aghọwo ọkachamara na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ na China.YOURLITE bụ onye na-ebubata ọkụ na ọkụ eletrik nke mba ụwa, ma na-agba mbọ ịnye ndị ahịa ọkụ ọkụ & ngwaahịa eletriki na ọrụ kacha mma.
YOURLITE eguzobela Yusing factory nke 78,000 square mita nke dị na Yinzhou, Ningbo na 2002. Ugbu a, Yusing factory nwere ihe karịrị 800 ọrụ.Anyị emeela mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na nke kwụsiri ike na ihe karịrị ndị na-eweta 200, ma soro ndị ahịa 1280 na-arụkọ ọrụ site na mba na mpaghara 60 karịa na Europe, America, na Asia, wdg.
Otu ọkachamara R&D bụ isi ihe na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke YOULITE.Anyị na-azụlite ndị tozuru oke, ikike ndị ọkachamara, guzobe ndị otu R&D ndụmọdụ nke ọma, na-etinye aka na ntinye ego R&D, na-elekwasị anya na ihe ọhụrụ na nkwalite teknụzụ.Anyị etinyela nnukwu ego na R&D iji mepụta bọlbụ LED dị elu, ọkụ iju mmiri, ọkụ panel, na ụdị ngwaahịa ọkụ ndị ọzọ.
YOURLITE gafere ISO9001 na BSCI njikwa njikwa njikwa njikwa nyocha yana ngwaahịa ndị a na-akwadokwa ihe karịrị ụkpụrụ mpaghara 20 dị ka CE, GS, SAA, Inmetro, na UL.
Ugbu a, Yourlite atụgharịala uche ya na ngwaahịa smart.A na-eji ngwa igwe dochie ngwaahịa ọkụ eletrik na ọkụ ọdịnala n'ọsọ ọsọ.Ekele maka mmepe na-adịbeghị anya na teknụzụ IoT, 5G, AI, wdg, anyị anabatala ihe ịma aka nke iweta "Smart Solution" zuru oke n'ahịa.
Ngwaahịa smart nke Yourlite gụnyere njikwa smart, smart ọkụ bọlbụ, smart ọkụ maka ụlọ, smart ọkụ maka azụmahịa, smart ọkụ maka mpụga, na ngwa ụlọ IOT.Ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ọkwa dị elu, usoro klaasị ụwa gụnyere nchekwa nwere ọgụgụ isi, njikwa ihu igwe & ọkụ, ohere ime ime, na ihe ndị ọzọ.Automation smart anyị na-eme ka ibi ndụ na ịrụ ọrụ dị mfe, nchekwa na nkecha.
YOURLITE ga na-elekwasị anya mgbe niile n'ihe ndị ahịa chọrọ, na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa dịkwuo mma, na-eji ohere ọ bụla maka mmepe, gbalịsie ike ịghọ akara ọkụ ama ama n'ụwa kachasị elu, na-aga n'ihu gaa n'ihu na-aga nke ọma na ebube.Naanị inye anyị echiche, anyị nwere ike inyere gị aka ime ka ọ bụrụ eziokwu.Anyị adịla njikere maka gị.
Nhazi ngwaahịa ọkachamara
Nkwado ndị ahịa raara onwe ya nye
Ahụmahụ na-edozi nsogbu
Ngwaahịa & Nkwakọ ngwaahịa
R&D |OEM |ODM |MOQ na-agbanwe agbanwe
Iji weta luminosity n'ụwa.
Iji bụrụ onye na-ebubata ihe n'ọkwa na ụlọ ọrụ ọkụ nwere ọgụgụ isi.
Iguzosi ike n'ezi ihe, agụụ na nraranye.
Akụkọ & Asambodo